Sidee loo kaydiyaa loona soo celiyaa kaarka SD ee loo yaqaan 'Raspberry Pi'? | Laga soo bilaabo Linux
Ka dib markii si guul leh loogu duubay nidaam qaar ka mid ah Raspberry Pi kaarka SD-ga iyos sida xaqiiqada ah waan sii wadaynaa inaan sameyno tijaabooyin qaar ee nidaamka cusub, iyo sidoo kale sameynta dejinta habeyn ku dhex jirta.
Laakiin wax Waxa aan ku kalsoonahay ayaa ah inaad u martay hawshan in kabadan hal jeer, xaqiiqda fudud ee ah inay jiraan dhowr nidaam oo qalabkan ah, waxaad iskaa u sameysay hawsha ah inaad tijaabiso si aad u ogaato midka ku habboon baahiyahaaga.
Nidaamkani wuxuu kuu sababi karaa inaad lumiso qaar ka mid qaabeynta nidaamka in aad hore u isticmaali jirtay iyo in haddii aad waydo aad hadhow ka qoomamayn karto isbedelka aad samaysay.
Si looga fogaado noocan qoomamada ah waxaan sameyn karnaa kahortag kaar ah kaarka SD iyo inaan awoodno inaan badbaadino nidaamyadaas iyo qaabeynta aan u aragno inay habboon yihiin.
Intaas oo keliya maahan, waa inaan sidoo kale tixgelinno in kaararka SD ay u muuqdaan inay leeyihiin waqti cayiman oo nolosha ah, sidaa darteed waligeed wax badan kama badna in la sameeyo gurmad ka hortag ah
Markaa haddii aad u malaynayso inay tahay waqtigii lagu kaydsan lahaa kaarkaaga SD, waxaan kugu martiqaadayaa inaad raacdo tilmaamaha soo socda.
Una siyaabaha ugu fudud ee kayd loogu sameeyo macluumaadka ku jira kaarka SD-ga ah waa in la sameeyo wadarta guud ee nuxurkeeda.
Waa maxay aan ku samayno tan waa in la abuuro sawir kaarka SD ah taas oo aan keydin karno si aan hadhow awood ugu yeelanno dib u soo celinta.
Marka si howshan loo qabto waxaa lagama maarmaan ah inaan kaarka SD ka soo saarno Raspberry Pi, kaas oo ay tahay inaan ka gooyno korontada.
1 Sidee loo sameeyaa kaydinta kaarka SD?
2 Sidee loo soo celiyaa keydkeena SD?
Sidee loo sameeyaa kaydinta kaarka SD?
Hadda waa inaan dhignaa kaarkayaga kumbuyuutarkayaga akhristaha kaarka ama adoo adeegsanaya adabtarada.
Tan ayaa la sameeyay waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarka soo socda si loo ogaado buurta uu SD-gu leeyahay.
Iyada oo amarkan waxaan arki doonaa barta buurta, iyo sidoo kale dhammaan qaybaha uu kaarkayagu leeyahay.
Ku dhowaad ahaan sida caadiga ah badanaa waa barta buurta / dev / sdb ama / dev / sdc xitaa haddii aad haysato aalado badan oo keyd ah oo ku lifaaqan qodobkan sii kordhaya way kala duwanaan karaan.
Xaalkayga waa / dev / sdb, aan iska indha tirno qormooyinka / sdb / sdb1, sbd2, sdb3 iwm Kuwaasi nama daneeyaan.
Hadda terminalka waxaan ku fulin doonnaa amarka soo socda
Waxaad ogaan doontaa in amarku la mid yahay midka aan u isticmaalno inaan ku gubno sawirrada diskiga, kaliya dhexdiisa ayaan ku beddeleynaa barta buurta iyo jidka sawirka cabbirka.
Arrinta kuwa yihiin isticmaaleyaasha Windows, waxay ka faa'iideysan karaan isla qalabkii lagu taliyay in lagu duubo sawirada Win32DiskImager.
Halkan habka loo sameeyo waa xulashada astaanta galka, sida haddii aan dooneyno inaan helno sawirka diskiga, laakiin halkan waxaan ku abuureynaa magaca sawirkeenna.
Waxaan isku dhejin karnaa galka aan dooneyno inaan ku keydinno sawirka keydkeena SD
Haatan waxaan dooran doonnaa wadada uu kaarka SD leeyahay.
Oo waxaan arki doonnaa in badhanka kaliya ee karti leh uu yahay "Akhriso" oo aan riix doonno si aan u bilowno hawsha aan ku soo celinno kaarka SD.
Dhamaadka howsha waan xaqiijin karnaa inuu sawirku kujiro wadada aan tilmaamno.
Sidee loo soo celiyaa keydkeena SD?
Qodob muhiim ah ayaa ah inaad ogaato in keydkan kaliya lagu duubi karo kaarka SD ee isku awood ah, oo aan ka yareyn.
Anigu iskuma dayin kaararka awoodda sare leh, laakiin guud ahaan hawshani waxay abuuri kartaa xoogaa khilaaf ah, maadaama qaybaha iyo qaybaha ay yihiin nuqul nacas ah.
SHaddii aad haysato kaar kale oo SD ah ama aad rabto inaad soo celiso kaydadkii aad abuurtay Waad ku samayn kartaa adoo raacaya tilmaamaha isku midka ah ee aad raacdo si aad ugu duubto nidaam kaarka SD qalabkaaga ah.
Marka howshu waa isku mid oo hadaad haysato kaarka SD oo isku awood ah waad ku sameyn kartaa baaritaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo kaydiyaa loona soo celiyaa kaarka SD ee loo yaqaan 'Raspberry Pi'?
Danie H. dijo
sxb, si aad kayd uga samayso daaqadaha dhamaan micro sd Memory ka kooban qayb, side loo samayn lahaa Farxad!
Jawaab Danie H
Nooca cusub ee tifaftiraha sawirka Krita 4.1.0 ayaa la soo saaray
KDE Plasma 5.13.2 waa halkaan iyadoo leh wax kabadan 20 hagaajin iyo hagaajin ah